ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်၍ အမြင့်ပေ ၅ဝ၁ဝ ရှိ လွိုင်နန်းဖတောင်သို့ ခြေလျင်တောင်တက် ? - Yangon Media Group
ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်၍ အမြင့်ပေ ၅ဝ၁ဝ ရှိ လွိုင်နန်းဖတောင်သို့ ခြေလျင်တောင်တက် ?
လွိုင်ကော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆
ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦး အယ်လ်ဖောင်းရှိုနှင့် တာဝန်ရှိသူ များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စုစုပေါင်း ဦးရေ ၂ဝဝ ခန့်တို့သည် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် နံနက် ၆ နာရီက ကယား ပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဒီးမော့ ဆိုမြို့နယ်၊ ဝါသောခိုရွာသစ်ကျေး ရွာအုပ်စု၊ လော်ခိုသာကျေးရွာရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၅ဝ၁ဝ ရှိ လွိုင်နန်းဖ တောင်သို့ ခြေလျင်တောင်တက် ခရီးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ကယား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ သိရ သည်။
ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် အဖွဲ့သည် နံနက် ၇ နာရီတွင် မြလဲကျေးရွာအုပ်စု၊ တေးဂေခို ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး တေးဂေခို ကျေးရွာဘုရားကျောင်းတွင် ဒေသ ခံပြည်သူများမှ မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် တင်ပြဆောင် ရွက်ရန်ရှိသည်များ တင်ပြဆောင် ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူထုတွေ့ဆုံ ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန် ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် တေးဂေခို ကျေးရွာမှ လွိုင်နန်းဖတောင်ခြေ သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အဆင့်ဆင့် တက်ရောက်ခဲ့ရာ နံနက် ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၂ဝတွင် လွိုင်နန်းဖတောင် ထိပ်သို့ ရောက်ရှိပြီး ပြည်နယ်ဝန် ကြီးချုပ်နှင့်လိုက်ပါလာသည့်ဌာန ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများမှ လွိုင်နန်း ဖတောင်သို့ တက်ရောက်မှုနှင့်ပတ် သက်ပြီး မိမိတို့၏ခံစားချက်များ၊ အမြင်များအား ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လွိုင်နန်းဖတောင် သည် ခြေလျင်တောင်တက်ခရီး သွားလုပ်ငန်းအတွက် အထင်ကရ နေရာတစ်ခုတွင် ပါဝင်လာခဲ့ရာ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ကယားပြည် နယ်သို့ လာရောက်သည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားများ၊ ဒေသခံပြည် သူများအတွက် ခြေလျင်တောင် တက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းထွန်းကား လာစေပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ စေရန်အတွက် လိုအပ်သောအစီ အမံများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအ တွက် ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်၍ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
စီရော်နယ်ဒို ရောက်ပြီးနောက် ဂျူဗင်တပ်အသင်း ဂျာစီရောင်းအား နှစ်ဆတိုးလာ
''မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရက်၂ဝ လောက် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားကို ရိုက်တာကတော့ ထူ
ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အဆင့်ဆင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု စရိတ်များ လျှော့ခ
NLD အမျိုးသမီးထုအနေဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး နည်းလမ်းရှာသင့်ဟု ဦ
ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း ဂိုးသမားကီပါ ဒဏ်ရိုက်ခံရ
ခေတ်အဆက်ဆက် အဖိနှိပ်ခံ တောင်သူများအတွက် မန္တလေးမြို့တွင် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်